हाम्रो बारेमा - SUZHOU GOODLUCK TRANSMISSION TECHNOLOGY CO., LTD
GL ले व्यावसायिक रूपमा स्टेनलेस स्टील चेनहरू उत्पादन गर्दछ, र ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 र GB/T9001-2016 गुणस्तर प्रणालीसँग प्रमाणित छ।
GL सँग बलियो टोली छ, CAD द्वारा डिजाइन गरिएको, प्रतिस्पर्धी मूल्य, राम्रो गुणस्तर, समयमै डेलिभरी, आश्वासन दिने वारेन्टी र अमेरिका, युरोप, दक्षिण एसिया, अफ्रिका र अष्ट्रेलिया आदिमा मैत्री सेवा प्रदान गर्दै, हामीले चेनहरू मात्र नभई धेरै भन्दा धेरै ग्राहकहरूलाई जित्न सक्छौं। , तर धेरै अन्य पावर ट्रान्समिसन पार्टहरू, जुन मानक GB, ISO, DIN, JIS र ANSI मानक अनुरूप छन्, जस्तै: SPROCKETS, PULLEYS, BUSHINGS, Couplings आदि।
ग्राहकहरूको अनुरोधहरू पूरा गर्नु, तपाईंको कामलाई सजिलै र प्रभावकारी बनाउन समर्पित गर्नु भनेको हामीले काम गरिरहेका छौं!
हाम्रो बिक्री नेट अन्तर्गत, हामी न्यानो रूपमा तपाईंको हामीसँग सामेल हुनको लागि पर्खिरहेका छौं, सँगै जित्न जानुहोस्!
ब्राजिलका एक ग्राहकले सुरुमा माइमियोग्राफद्वारा साधारण चेनको लागि मात्र सोधपुछ गरे। हामीले चेन प्यारामिटरहरू, नमूना रेखाचित्र र उद्धरण दियौं, र त्यसपछि नमूना पुष्टि गर्यौं। हरेक पाइला सहज र सफलताका साथ अघि बढ्यो । ग्राहकले तुरुन्तै धेरै हजार डलरको सानो अर्डर राख्यो। सामानहरू प्राप्त गरेपछि, म गुणस्तर र डेलिभरीसँग धेरै सन्तुष्ट छु, र त्यसपछि मात्र दीर्घकालीन आदेशहरू होइन, तर सम्बन्धित मेकानिकल उत्पादनहरू र मोटर वाहन उत्पादनहरू पनि। यसरी प्रमुख ग्राहक बने।
एक अष्ट्रेलियाली ग्राहक पनि प्रसारण श्रृंखलाबाट सुरु भयो र स्ट्रेट होल स्प्रोकेट, टेपर्ड होल स्प्रोकेट, स्टेनलेस स्टील स्प्रोकेट, र त्यसपछि टेपर्ड होल पुली, स्ट्रेट होल पुली, ट्यापर्ड स्लिभ्स, र विभिन्न कपलिंगहरू, आदिमा विकसित भयो, विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू। त्यहाँ हजारौं प्रकारहरू छन्, प्रत्येक अर्डर सयौं हजार डलर पुग्छ।
एक दक्षिणपूर्वी एसियाली ग्राहकले धेरै हजार डलरको सानो ब्याच विशेष स्प्रोकेट मूल्य मागे, किनभने चित्र अनुसार उद्धृत गर्न व्यावसायिक ज्ञान चाहिन्छ। ग्राहकको पहिलो अर्डर सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यस पछि, ग्राहकले ट्रान्समिसन पार्ट्स बाहेक अन्य उत्पादनहरू खरीद गर्न पनि कमिसन गरे, र यो उत्पादनले अब प्रत्येक पटक एक 20' कन्टेनर अर्डर गर्दछ। निष्ठा र व्यावसायिक ज्ञानमा भर पर्दै, हामीले ग्राहकहरूको निरन्तर विश्वास जितेका छौं। ग्राहकहरूलाई राम्रो सेवा पनि कम्पनीको लागि सानो सन्तुष्टि होइन।
कम्पनी 1997 मा स्थापित भएको थियो र स्टेनलेस स्टील चेन को उत्पादन मा संलग्न छ। बजारमा ग्राहकहरूसँगको सहकार्यमा, व्यवसायको निरन्तर विकासको साथ, हामीले प्रसारण चेनहरू र कन्वेयर चेनहरू, साथै स्प्रोकेटहरू, पुलीहरू, बुशिंगहरू र युग्मन उत्पादनहरू विकास गरेका छौं। कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई अझ राम्रो सेवा दिनको लागि क्रमशः आफ्नो निर्यात कम्पनी व्यवसायको विकास गरेको छ।